iPhone5(आइफोन फाइभ) नेपालमा चल्दैन | Provides complete information about Nepal‘s local product, business, news, events, coupons, local hero, local model, local culture, travel, trekking, biking or anything that related to Nepal.
काठमाडौँ, भदौ २८ ९नागरिक० – एप्पलले आफ्नो बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोनको नयाँ संस्करण आइफोन फाइभ गएराति अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, जापान, हङकङ, सिंगापुरमा असोज ५ गतेदेखि उपलब्ध हुने र बाँकी १०० देशमा यो वर्षको अन्त्यसम्म उपलब्ध हुने बताएको छ। तपाईँ पनि यो फोन किनौँला वा विदेशबाट कसैलाई मगाउँला भन्ने सोचिरहनुभएको छ रु त्यसो हो भने ध्यान दिनुस्, अहिलेको अवस्थामा आइफोन फाइभ नेपालमा चल्दै चल्दैन। आइफोनका कुनै पनि मोडल नेपालमा आधिकारिक रुपमा बिक्री सुरु भएको छैन। आइफोनले विश्वभरका टेलिकम अपरेटरहरुसँग मिली कन्ट्र्याक्टमा यो फोन बेच्ने गर्छ। तर सिम अनलकु गरी त्यसलाई नेपालमा पनि चलाउन सकिने बनाइएको छ। आइफोनका पुराना संस्करणहरुमा यो सुविधा उपलब्ध भए पनि आइफोन फाइभ भने सिम कै कारण नेपालमा चल्न सक्दैन। किनभने आइफोन फाइभमा प्रयोग हुने सिम नानो सिमु हो। नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएललगायत नेपालका कुनै पनि टेलिकम अपरेटरले नानो सिमु वितरण गर्दैनन्। आइफोनको यसअघिका मोडलमा प्रयोग हुने माइक्रो सिम पनि नेपाली टेलिकम अपरेटरहरुले उत्पादन गरेका छैनन्। नेपाली अपरेटरहरुले रेगुलर सिम मात्रै उत्पादन गर्छन्। तर सिम कटरले काटेर यहाँका प्रयोगकर्ताहरुले रेगुरल सिमलाई नै माइक्रो सिम बनाई त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। नानो सिम पनि त्यसैगरी बनाउन संभव छ त रु छैन । नानो सिम आकारमा मात्र सानो हैन, पातलो पनि हुन्छ। सिम काटेर सानो बनाए पनि पातलो बनाउन सकिँदैन। माइक्रो सिमभन्दा नानो सिम १५ प्रतिशतले पातलो हुन्छ। त्यसैगरी यो माइक्रो सिमभन्दा ४० प्रतिशत सानो हुन्छ। रेगुलर सिमलाई नानो सिम बनाउन नसकिए पनि नानो सिमलाई भने रेगुलर सिम वा माइक्रो सिम बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि एडेप्टर किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए के गर्ने त रु नेपाली टेलिकम अपरेटरहरुले नानो सिम उत्पादन नगरेसम्म पर्खने। अथवा नेपालमा पनि रोमिङ सेवा भएको विदेशी टेलिकम अपरेटरको सिम लिएर यहाँ पनि चलाउने। तर ध्यान राख्नुस्, रोमिङ सेवा निकै महँगो हुन्छ। अर्को एउटा आशा पनि छ, कसैले रेगुलर सिमको मोटाइसमेत घटाउने उपाय निकाल्ने। त्यसो त केही चिनियाँ वेबसाइटमा नानो सिम कटर उपलब्ध भएको विज्ञापन पनि राख्न सुरु भएको छ। तर चिनियाँ टेलिकम अपरेटरहरुले नै काटेर नानो सिम बनाउन नसकिने बताइसकेको छ। किन एप्पलले आफ्नो उत्पादनमा नानो सिम प्रयोग गर्‍यो त रु यसका दुई कारण छन्। एउटा त उसले आइफोन फाइभलाई पातलो बनाएको छ। फोर एसभन्दा १८ प्रतिशत पातलो छ यो। पातलो बनाउनका लागि सिम राख्ने ठाउँ पनि पातलो बनाएको हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को कारण सिम अनलकबाट बच्न खोज्नु हो। माइक्रो सिम प्रयोग गर्ने पहिलो मोबाइल कम्पनी एप्पल नै थियो। तर चिप्ससहितको गिभे सिम राखेर त्यसलाई अनलक गर्न सकिन्थ्यो। नानो सिममा भने चिप्स राख्ने ठाउँसमेत हुन्न। त्यसैले सिम अनलक गर्न नसक्ने बनाउनु एप्पलको उद्देश्य भएको एबसिन्थे जेलब्रेकवालाहरु बताउँछन्।
के छ आइफोन फाइभमा
नयाँ आई फोन यसअघिको मोडलभन्दा अझ पातलो र अझ हलुका र अझ छिटो हुनेछ। यो ७।६ मिमि पातलो हुनेछ। फोरएस मोडलभन्दा यो १८ प्रतिशत कम हो। त्यसैगरी यसको वजन ११२ ग्राम छ, जुन पुरानो मोडलभन्दा २० प्रतिशत हलुका हो। आइ फोन फाइभ शिशा र आल्मुनियमको प्रयोग गरी बनाइएको छ। एप्पलको ए६ चिप्स प्रयोग गरिएकोले यसको सीपीयु दुई गुणा छिटो हुने कम्पनीको दावी छ। वाइफाइ चलाउँदा यसको ब्याट्रीले १० घण्टासम्म धान्ने एप्पलले बताएको छ। यसबाट खिचिने प्यानोरेमिक फोटो २८ मेगापिक्सेलको हुनेछ। अगाडि, पछाडि र मुनि गरी यसमा तीन वटा बिल्ट इन माइक हुनेछ। यसको प्रि अर्डर शुक्रबारबाटै सुरु हुने र एक सातापछि सेप्टेम्बर २१ देखि किन्नेलाई पठाउन थालिने एप्पलले बताएको छ। आई फोन फोर एसकै मूल्यमा फाइभ पनि बेचिनेछ। एप्पलले आई फोन फोरलाई भने कन्ट्रयाक्ट फ्रिमा बेच्ने घोषणा गरेको छ।
News source: Thursday, 13 September 2012 17:33 नागरिक
← BB Airways to start service from Oct 11
In ‘good sign’ for the winter, Kulekhani water level rises →
One Response to “iPhone5(आइफोन फाइभ) नेपालमा चल्दैन”
Great post, I think website owners should acquirealot from this web site its really user genial. So much fantastic info on here .